Taariikhda Iyo Waxqabadkii Hore Ee Murashaxiinta Madaxweynaha Ee Maanta Khudbeynaya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Taariikhda Iyo Waxqabadkii Hore Ee Murashaxiinta Madaxweynaha Ee Maanta Khudbeynaya
Murashax Madaxweyne Dr. Cabdinasir Cabdulle Maxamed
Dr. Cabdinasir Cabdille Maxamed Jaamac, waxaa uu ku dhashay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud sanadkii 1970-kii.
Cabdulle, waxaa uu dusgi hoose ka qaaday magaalada Muqdisho, dugsi dhexe iyo sarana caasimadda Kenya ee magaalada Nairobi.
Waxaa uu Jaamacadda heerka koowaad ka diyaariyay kuliyadda cilmiga siyaasadda ee Jaamacadda North Carolina ee dalka Mareykanka, waxaa kaloo uu degree ka wadaa cilmiga xayawaanka.
Waxaa uu ka shaqeeyay Machadka caalamiga ah ee Health science, Waxaa Doctor of Dental ka diyaariyay Jaamacadda North Carolina.
Shaqo: Waxaa uu Maamulay goobo caafimaad oo ku yaalo North Carolina, waxaa uu ka mid yahay murashaxiinta xisbiga Gurmad, waxaa uu ka mid ah yahay murashaxiinta madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka ah.
Murashax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame:
Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa uu ku dhashay 1968-dii magaalada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan.
C/raxmaan wuxuu shahaadadiisii Koowaad ee Jamacadda ka qaatay Jaamacadda Caalamiga ah ee Afrika ee wadanka Suudaan oo uu ka bartay sharciyada, isagoo Shahaadadii Labaad Masters Degree ku sameeyey (LOW COMPARATIVE FEDERALISM) wadanka Malaysia Jaamacadda National University Of Malaysia.
Waxaa uu si fiican u soo caanbaxay wada hadalladii Djibouti ku dhexmaray maxaakiimta Islaamiga ah iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf madax u ahaa, isagoo hogaaminayey wafdigii wadahadallada u matalayey isbaheysigii dib u xoreynta Soomaaliya ee ARS, wada hadalladaas ayaa markii dambe lagu dhisay dowlad, waxaana hoggaamiye ka noqday Sheekh Sharif Sheekh Axmed.
Xukuumaddii Cumar Cabdirashid ee xiligii Sheekh Shariif Febraury 21. 2009- illaa Nov-18-2010, waxaa Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame ka ahaa Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga Caalamiga ah, waxaa uu sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaankii TFG-da.
C/raxmaan C/shakuur waxaa uu ahaa 4-tii sano ee lasoo dhaafay La taliyaha Dhinaca siyaasada ee ergayga Xoghayaha Guud ee Qaramada midoobay u qaaabilsan Arrimaha Soomaaliya.
June 20, 2016: Waxaa uu ku dhawaaqay in uu yahay murashax u taagan doorashada Soomaaliya 2016ka
Murashax Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamud Faroolle
Cabdiraxmaan M. Faroollee waxaa uu ku dhashay degmada Eyl sanadkii 1945-tii,
Waxbarashadiisa: Waxaa uu Diploma ka sameeyay 1964 Scuola Professionale Sanitaria iyo International Statistical Institute ee magaalada Beirut ee dalka Lebanon, labada shahaaddo mid waa public health halka tan kale ay tahay statistics.
1985: Waxaa Jaamacadda Umadda ka dhameeyay Bachelor of Commerce in Economics and Commerce, waxaa uu sidoo kale Master ka sameeyay Business Administration isagoo ku taqasusey Financial Management,
Inta aanu siyaasadda soo gelin shaqooyinkii uu qabtay waxaa ka mid ahaa agaasimaha Bangiga dhexe ee Soomaaliya
Siyaasadda: Waxaa uu wasiirka Maaliyadda ka ahaa xukuumaddii Cabdulahi Yusuf ee maamulka Puntland, Duqa gobolka Nugaal ayuu sidoo kale noday, Xukuumaddii Cadde Muuse waxaa uu ka ahaa wasiirka qorsheynta kadib waxaa auu aasay Melbourne, Australia, kadib markii ay isku dhaceen ninka dambe isagoo guda galay waxbarashada Phd-da La Trobe University
Faroolle waxaa uu noqday madaxweynihii 4-aad ee Puntland, waxaa uu maamulka Puntland madaxweyne ka noqday mudadii u dhaxeysay January 8, 2009 – January 8, 2014
Mudadii uu xukunka hayey waxaa lagu xasuustaa:
Heshiisyo uu la galay Galmudug: Heshiisyada ayaa ahaa dhanka ammaanka, shaqaalaha iyo iskaashi dhinacyo badan.
Dagaallada Galgala: waxaa uu muddo dagaal kula jiray ciidamo dagaal ka galaayey Galgala, Ciidamadan waxaa hogaaminayey ninka isku soo dhiibay dowladda ee Atam.
Nidaamka Axsaabta Badan: Mudadii uu xilka hayey waxaa la meelmariyay Dastuur cusub oo adkeynaya dhismo axsaab kala duwan.
Murashax Madaxweyne Cabdiqadir Cosoble Cali
Cabdiqadir Cosoble Cali, waxaa uu ku dhashay magaalada Luuq/Gedo sanadkii 1962-dii, waxbarashada ilaa sare waxaa uu ku qaatey magaalada Muqdisho halka uu Jaamacadda ka dhameeyay Jaamacadda Azhar ee dalka Masar.
Waxyaabihii uu ka shaqeeyay 2002-kii kadib, waxaa ka mid ah: Shirkado Duulimaan, Lojistik iyo shirkado kale oo ganacsiga ku saabsan, 8-dii sano ee ugu dambeysay waxaa uu ahaa Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka-ka Soomaaliya, 4-tii sano ee ugu dambeeyay waxaa uu ahaa Guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka, waa markii 2aad ee uu jagadana madaxweynimada usoo istaago.
Murashax Madaxweyne Cabdulahi Ciilmooge Xirsi:
Cabdulahi Cilmooge waxbarashadiisa waa ciidan iyo askarinnimo, waxaa ka tirsanaa ciidanka xogga dalka, ilaa darajada Gashaanle sare ayuu noqdey , waxbarashadiisa waxaa uu ku soo qaatey dalalka Ruushka iyo Mareykanka.
Shaqooyinkii uu soo qabtey waxaa ka mid ahaa in uu Qaramada Midoobey gaar ahaan WFP u fadhiyay Afgaanistaan, Ciidamada Mareykanka qeybta Minnisotta waxaa uu u ahaa Maamule xagga IT-ga ah.
Xukuumaddii Farmaajo ee dowladdii Sharifka waxaa uu isku qabtey wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta, gaadiidka cirka iyo dhulka.
Hadda Cabdulahi Cilmooge waa guddoomiyaha xisbiga Xiis.
Baahida uu u soo istaagey waxaa uu sheegey in rajadii uu qabey dib u soo noqoshada Soomaaliya aaney dhicin, isagana uu noqon doono ninkii rajadaas soo celin lahaa.
Murashax Madaxweyne Eng. Cabdullahi Xasan Cali
Eng. Cabdullahi Xasan Cali ilo ku dhaw, waxaa ay Goobjoog News u sheegeen in uu tanaasuley, si kastaba ha ahaatee, waxaa uu ahaa sidan:
Eng. Cabdullahi Xasan, waxaa uu ku dhashay Muqdisho 1964-tii, waxaa uu Jaamacadda umadda ka qaatey BSC degree ee Civil Engineering November 15, 1984, waxaa uu sidoo kale 1990-kii dhameeyay Master-ka.
Shaqooyinkiisa waxaa ugu muhiimsanaa isagoo macalin dugsi sare ka noqdey 1985-tii, Jaamacadda Umadda 1986-1990-kii.
Waxaa uu sidoo kale ka shaqeeyay hey’ado caalami ah iyo kuwa gudaha ah sida: (DBG) iyo Daryeel BulshoGuud,
Eng. Cabdullahi hadda waa aasaasaha iyo madaxa CED
Murashax Madaxweyne Cali Xaaji Warsame
Cali Xaaji Warsame waxaa uu ku dhashay Seemade, Jariiban, Mudug 1964-tii, Waxbrashadiisa sare iyo heer Jaamacadeed waxaa uu ku qaatey Muqdisho isagoo ka baxay Machadkii SIDAM, dalka Mareykanka waxaa uu 1999-kii ka soo qaatey shahaadada CPA.
Shaqooyinkiisa waxaa ugu muhiimsanaa: 1991-kii, waxaa uu noqdey maareeyihii dekadda Boosaaso, waxaa uu muddo ka shaqeeyay wasaaradda waxbarashada Imaaraadka,
2006-dii, Hanti-dhowrka guud ee shirkadda Golis ayuu noqdey, isagoo markii dambe 2012-kii noqdey Maareeya guud ee isla shirkadda Golis.
Waxaa uu dowladda Puntland ka noqdey wasiirka waxbarashada, tartan ayuu u galay jagada madaxweynaha maamulkaasi, hadana waxaa uu ka mid yahay murashaxiinta madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka.
W/D: Cabdi Caziz Axmed Gurbiye, xigasho Goobjoog News
Previous articleEng. Cabdullaahi Cali Xasan oo ka haray tartanka madaxtinimo ee Soomaaliya
Next articleQM oo cunoqabatayn ka qaaday hogaamiye kooxeed u dhashay dalka Afhanistan